Muchuchusi Mukuru weHurumende Oendeswa kuMatare neGALZ
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumirira nhengo dzesangano reGays and Lesbians Association of Zimbabwe, anoti ari kuronga kukwirira dare muchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, achiti vari kushandisa mutemo zvisizvo mukutyora kodzero dzevanhu vavari kumiririra.
Muchuchusi wehurumende, Amai Phyllis Zvenyika, neChina vakapikisa kupihwa gwaro rekufambisa ra Ellen Chademana, nhengo yeGALZ vachiti anogona kuzotiza mhosva yake iri kumatare iri kutarisira kutongwa kutanga kwemwedzi unouya.
Amai Zvenyika vaishandisa mutemo we Criminal Procedure Section 121 unopa hurumemende mazuva manomwe ekuti irambe kutambira mutongo wedare.
Chademana naIgnatious Mhamba vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuva nemifananidzo yevanhu vasina kupfeka mbatya, uye kuva nezvinodhaka.
Asi mutongi wedare, VaDon Ndirowei, vainge vati Chademana aikwanisa kupihwa gwaro rake rekufambisa rakatorwa nedare kuitira kuti aende kuAmerica kwesvondo rose kunodzidza nezvekugadzirisa mabopoto kana kuti "conflict resolution".
VaDavid Hofisi vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaHofisi vanoti VaTomana vari kushandisa mutemo zvisizvo nekudaro vanofanira kuendeswa kumatare.